Ajaaniibta oo ay in muddo ah ku qaadato gelitaanka suuqa shaqada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Safka xafiiska shaqada. sawir: YVONNE ÅSELL / SvD / TT
Ajaaniibta oo ay in muddo ah ku qaadato gelitaanka suuqa shaqada
Bashir Ahmed:"Ma rabo in aan adeega nadaafada ka shaqeeyo"
La daabacay fredag 1 september 2017 kl 10.34
Shan sannadood dabadeed ayey ajaaniibtu tobankiiba toddoba ey dalka ku shaqa bilaabaan, halka ey tiro bar ka yar qayb dhab ah ka noqdaan suuqa shaqada.
Muddo ayay ku qaadataa ajaaniibta sidii ey qayb uga noqon lahaayeen suuqa shaqada, sida ku cad war-bixin cilmi-baaris ee laga soo saaray hayadda dawliga ee qiimeeynta oo magaceeda loo soo gaabiyo IFAU.
–Haddii mustaqbalka horay loo eego waxaa noo muuqata xaalad caadi ah iyo ka qayb gal suuqa shaqada, sida uu sheegay Olof Åslund, agaasimaha guud ee hayadda IFAU, Machadka qiimeeynta suuqa shaqada iyo siyaasadda wax-barashada.
Ajaaniibta dalka ku cusub ayaa badankood ka shaqeeya shirkadaha yaryar, halka ay waagii hore ahaan jirtay in loo diro howlaha shirkadaha.
Baadhitaankan ayaa sheegaya in 45% ey shaqo heleen shan sanadood gudahood halka ay tiradani tahay boqolkiiba 80 kuwa dalka joogay 15 sanno. Waa dadkii yimid intii u dhaxeeysay 1990 ilaa 2014 sida uu baadhitaanku muujinayo.
-Kuwa u jeeda in qaxootiga faraha badan ee dalkan yimid shaqooyinka ka qaadi doonaan ajaanibtii hore u degana Iswiidhan wey khaldanyihiin, sida uu sheggay Olof Åslund.
Bashir Ahmed ayaa dalkan yimid toban sanno ka hor. Wuxuu ka yimid waddanka Bangladesh. In kasta oo uu aqoon u leeyahay dhowrista beeyada wuxuu hadda ka shaqeeya shirkada adeega nadaafada. Wuxuu sheegay in luuqada iswiidhisku tahay muftaaxi lagu gelayay suuqa shaqada. Waxaanu rajeeynayaa inuun mustaqbalka ka shaqeeyo xirfada uu soo bartay.
-Ma rabo in aan adeega nadaafada ka shaqeeyo, ayuu sheegay Bashir Ahmed oo dalkan ku noolaa muddo toban sanno ah.